यी पाँचसँग सपनामा सहवास गरेको देख्नुको अर्थ के हो ? | We Nepali
नेपालको समय: १३:३१ | UK Time: 07:46
यी पाँचसँग सपनामा सहवास गरेको देख्नुको अर्थ के हो ?
२०७५ वैशाख १७ गते १७:०७
सपना प्राय: सबै मानिसले देख्छन् । सपनाका बारेमा अनेकन किस्साहरु चलनचल्तीमा सुनिन्छन् । हाम्रा ठूलाबडा र ब्रुजुक सपनाका परिणामबारे पनि हामीलाई भन्छन्, ‘तिम्रो लागि यो शुभ हो, यो अशुभ ।’ तर, सबैले अलग–अलग सपना देख्छन । केही सपनाहरु यस्ता पनि हुन्छन्, जो सेक्ससँग सम्बन्धित हुन्छन् । यस्ता सपनाको पनि अर्थ हुन्छ ।
यदि तपाईंलाई यस्तो सपना आउंछ, जसमा तपाइँ आफ्नो पतिसँग होइन्, कुनै दोस्रो ब्यक्तिसँग सेक्स गरिरहेको हुनुहुन्छ । यस्तो सपनाको अर्थ के हुन्छ ? तपाइँले कहिले सोच्नुभएको छ ? के सेक्सको सपनासँग तपाईको कुनै सम्बन्ध छ ?
पाँच प्रकारका सेक्स सपनाका अर्थ के हो ? यसबारेमा तल चर्चा गरिएको छ –
आफ्नो पार्टनरका साथ
यदि तपाईं आफ्नो सपनामा पति वा लभरका साथ सेक्स गरिरहेको हुनुहुन्छ भने यसका दुई फरक–फरक अर्थ हुन्छ । पहिलो तपाईंको सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ । यसको दोस्रो अर्थ हुन्छ, तपाईं आफ्नो पार्टनरबाट त्यो सबै पाइरहनु भएको छैन्, जुन तपाईं चाहनुहुन्छ । सेक्सोलोजिष्टहरुका अनुसार यदि यस्तो सपना देखिन्छ भने एक पटक आफ्नो पार्टनरसँग कुरा गरेर कारण जान्ने कोशिस गर्नुपर्दछ ।
पूर्व प्रेमी वा प्रेमिका साथ
यदि तपाई सपनामा आफ्नी पूर्व गर्लफ्रेण्ड वा ब्वाइफ्रेण्डका साथ सेक्स गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको मतलब हुन्छ, पूरानो प्रेमी/प्रेमिकासँग तपाईंको सेक्स लाइफ एकदमै आनन्ददायक थियो होला । वा फेरि पनि हुन सक्छ । हुन सक्छ, तपाईंले आफ्नो नयां पार्टनरको तुलना पूरानो पार्टनरसँग नगरेको हुन सक्छ । तर, तपाईंको अचेतन मनले भने त्यो गरिरहेको हुन सक्छ ।
आफूलाई मन परेको स्टारका साथ
यदि तपाईं सपनामा आफूलाई कुनै मनपर्ने स्टारसँग सेक्स गर्दै हुनुहुन्छ भने यसको मतलब हुन्छ कि तपाईं आफ्नो पार्टनरमा अरु कुनै चिज खोजिरहनु भएको छ । तपाईं उक्त स्टारको लुक र सफलता आफ्नो पार्टनरको खुबीमा मिलाउन थाल्नुहुन्छ ।
यदि तपाईं आफै समलिङ्गीको साथ अन्तरंग सम्बन्ध बनाउने सपना देख्नुहुन्छ । यस्तो सपनाको मतलब हुन्छ, तपाईं सेक्सप्रति सिधा हुनुहुन्छ ।
उच्च ओहदाका राजनीतिज्ञ को कति कोभिड प्रभावित